Koobabkan Lama Dhici Karo!,” – Miyuu Cristiano Ronaldo Ku Digtay Luka Modric Kaddib Abaalmarintii Labaad Ee Uu Ku Gaaracay!? – Aqri Ereyedan…
Kaddib markii uu Luka Modric ku guuleystay abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan FIFA, masxafka Cristiano Ronaldo waxa ay Social Media la soo dhigay: “Koobabkan laba dhici karo, tani waa yaab.” Ronaldo iyo Messi midkoodna kama soo qeybgalin xafladdii London ee lagu bixiyey abaalmarinta sare. Gaar ahaan, taageereyaasha Portugal waxa ay qabeen in Ronaldo u qalmay hanashada...
“Lionel Messi Nolol Ma Leh,” – Dani Osvaldo Ayaa Sidaas Yiri
Lionel Messi waa ciyaaryahanka ugu weyn dunida, waxaa fallanqeeyey Dani Osvaldo. Messi waxa uu dhibane u yahay guulaha uu ka gaaray kubadda cagta. Tani waa aragtida Kubad ciyaarihii hore, Osvaldo oo sheegay in ay dhibi lahayd haddii uu joogi lahaa booska Argentine-ka. Lionel Messi waxaa loo aqoonsan yahay xiddigga ugu sarreeya aduunka waxaana la scoda caannimadiisa. 31...
Warbixin: Manchester United Oo Soo Xereysay Dhakhli Aad Uga Badan Kii Sanadkii Hore
Manchester United waxa ay diiwaan galiyey dhakhli badan oo u soo xerooday dhaqaale sanadeedka sanadkan 2018. Red Devils waxa ay soo xereysay £590million sanad dhaqaaleedkii tegay, iyada oo macaash u heshay £44.1m. Ku xigeenka madaxa fulinta ee United, Ed Woodward waxa uu yiri: “Qof walba oo kooxda ka tirsan waxa uu si aan daal lahayn uga shaqeynayaa sidii ay Manchester...
James Milner oo ka camirtay saaxiibkiis Mohamed Salah
Laacibka kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa xalay ku guuleystay abaalmarinta goolka ugu fiican sanadka ee FIFA Puskas Award. Weeraryahanka Masar ayaa ka mid ahaa saddexda musharrax ee ugu dambeysa abaalmarinta FIFA Men’s Best Player, walow uu Luka Modric hantay abaalmarintaas. Sidoo kale Salah ayaa ku hungoobay inuu ka mid noqdo FIFA World XI ama kooxda sanadka ee...
“Waa Laba Xushmadlaayeyaal,” – Fabio Capello Oo Furka Ku Tuuray Cristiano Ronaldo & Lionel Messi
Fabio Capello waxa uu ku eedeeyey Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo xushmad la’aan kaddib markii ay imaan waayeen xafladdii lagu calleemo saarayey dhiggooda. Ronaldo waxa uu ka mid ahaa saddexdii loo soo xulay in ay masraxa fuulaan oo ay kula jireen Mohamed Salah iyo Luka Modric. Labadaba, xiddigga Juventus iyo Lionel Messi oo ay la yaab noqotay in uusan ku jirins saddexd...
Dagaalkii Pogba Iyo Mourinho Oo Soo Cusboonaaday Iyo Xiddigga Oo Furka Ku Tuuray Qaab Ciyaareedkiisa
Paul Pogba markale ayuu weeraray Jose Mourinho isaga oo ku eedeeyey adeegsiga kaarto xun. United waxa ay barbardhac 1-1 la gashay Wolves oo walib ku sigtay in ay lumiso dhibacaha. Pogba waxa uu caawiyey goolkii United ee Fred saxiixay qeybtii hore. Kooxda Mourinho boosas badan ayey daafaca ka baaneeneysay taas oo keentay in wiilasha Wolves ay dadaalkoodii mira dhalo. Advertisement Joao...
Hordhacyo: Arsenal Vs Everton, -West Ham Vs. Chelsea – Arsenal Vs. Everton
Maanta oo Axad ah waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan Premier League oo so gaaray ciyaarihiisii 6-aad ama Matchday Six. Kooxaha maanta dheelaya waxaa ugu tun waa weyn Arsenal iyo Chelsea oo lagu tiriyo kuwo ku jira kooxaha qaadi kara horyaalka. Arsenal Vs. Everton Maxaa Cusub? Sead Kolasinac, Laurent Koscielny, Ainsley Maitlaind-Niles iyo Konstantinos Mavropanos...
Ronaldo Waxa Uu Rabaa Hal Wax Oo Aysan Real Madrid Siin Karin! Waxaa Aragtidaas Qaba Guillem Balague
Cristiano Ronaldo waxa uu aad uga baahan yahay Juventus “JACEYL” arrin uu ka waayey ama aysan siin karin Real Madrid, sidaas waxaa qaba Guillem Balague. Ronaldo waxa uu Juventus xagaagan ugu soo biiray £105million kaddib 9 sano oo uu ku sugnaa Real Madrid. ...
Ma Ku Dhaafeen Goolashii Kooxdaad? Halkan Ka Daawo Goolashii Kulamadii Shalay Ee Tartamada Ugu Waaweyn Yurub
Waxa shalay la ciyaaray kulamada kala duwan ee horyaalada yurub iyada oo ay kooxaha waaweyn gaadheen guulo ay u qalmeen siina wadeen qaab ciyaareedkoodii fiicnaa. Ma City,Liverpool,Tottenham,Inter Milan,Real Madrid,Bayern Munich Atletico Madrid ayaa dhamaantood guulo gaadhay halka ay Man United taako kala kulantay kooxda Wolves. Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa...
Pedro Oo Booskan Eden Hazard Ka Galiyey Liiska Ugu Sarreeya Ee Ciyaaryahanada Hadda Aduunka Ugu Wanaagsan
Garabka Chelsea Pedro Rodriguez waxa uu sheegay in Edin Hazard ku soo dhawaanayo Lionel Messi oo uu u qalmo in lagu tilmaamo laacibka ugu wanaagsan dunida. Pedro waxa uu Messi uga soo garab dheelay laba fiinaale Champions League oo ay ku guuleysteen kahor inta uusan 2015 imaan Chelsea. Hazard si heer sare ah ayuu ku bilaabay xilli ciyaareedkan waxa uuna dhaliyey toddobaadkii...